Mfatoho A Wɔdze Kyerɛkyerɛ | Akenkan & Nkyerɛkyerɛ
Mfatoho A Wɔdze Kyerɛkyerɛ
DZA ƆSƐ DƐ EYƐ: Fa mfatoho a n’ase tse nnyɛ dzen na w’etsiefo no enyi bɛgye ho, na aber kor no ara ɔbɛkyerɛkyerɛ wo nsɛntsitsir mu no dzi dwuma na ama wo nkyerɛkyerɛ eetu mpon.
Fa mfatoho a n’ase tse nnyɛ dzen dzi dwuma. Sũasua Jesus, na fa ndzɛmba nketsenketse kyerɛkyerɛ ndzɛmba akɛse mu, na fa ndzɛmba a n’ase tse nnyɛ dzen kyerɛkyerɛ dza n’ase tse yɛ dzen mu. Mma mmfa nsɛm a no ho nnhia nnhyehyɛ wo mfatoho no mu, annyɛ dɛm a ne ntseasee bɛyɛ dzen. Hwɛ hu dɛ wo mfatoho no mu nsɛm no fa esuadze a epɛ dɛ ekyerɛ no ho ankasa. Sɛ edze nsɛm bi a mfaso nnyi do anaa ɔmmfa asɛm no ho ba mu a, obotum ama w’etsiefo no adwen etu afora.
Fa w’enyiwa to famu. Hwɛ ndzɛmba a etwa wo ho ehyia, sũa asafo nwoma ahorow, na tsie hɔn a wonyim nkyerɛkyerɛ yie no. Ereyɛ dɛm nyina nna erehyɛ mfatoho a ibotum dze edzi dwuma ma wo nkyerɛkyerɛ etu mpon no nsew. Afei kyerɛw to beebi na fa sie.
Ma dza ɔbɔboa w’etsiefo no ntsena w’adwen mu. Fa ndzɛmba a w’etsiefo no dze dzi dwuma na hɔn enyi gye ho no yɛ mfatoho. Hwɛ yie na wo mfatoho no annhyɛ hɔn fɛr anaa annhaw hɔn.
Fa kyerɛkyerɛ asɛntsitsir no mu. Nsɛntsitsir no na ɔsɛ dɛ ema ho mfatoho, na nnyɛ nsɛm nketsenketse biara kɛkɛ. Hwɛ hu dɛ nnyɛ mfatoho no ara kɛkɛ na nyia oritsie wo no bɛkaa, mbom esuadze a ɔwɔ mu no so.
MA W’ENYI NKU AKENKAN NA NKYERƐKYERƐ HO​—VIDEO AHOROW
Ebɛyɛ dɛn dze mfatoho a otu mpon edzi dwuma dɛ Ɔkyerɛkyerɛfo Kɛse no?
Akenkan Na Nkyerɛkyerɛ​—Mfatoho A Wɔdze Kyerɛkyerɛ